Tale Jeneralin’ny Kraoma Mitaky ny fialany ihany koa ny fiarahamonina
Ankoatry ny fanambarana izay efa nataon'ireo agents d'encadrement sy ny agents de maîtrise miaraka tamin’ny solotenan'ny mpiasa tany Brieville, dia nihetsika nanampy ny mpiara-monina nitaky sy nanamafy ny fitakiana hialan'ny Tale Jeneraly ankehitriny,
Nirina Rakotomanantsoa. Vahoaka an’arivony no tonga namaly ny antson'ny solotenan'ny mpiasa izay nilaza fa leo ny fandrebirebena ataon'ny tale jeneraly ankehitriny. Isan'ny antony itakiana ny fialany ny tsy fitadiavana vahaolana hanodinana ny orinasa nandritra ny 9 volana. Nilaza ny Tale tamin'izany fa stratejia mihitsy io kanefa efa mihatra amin’ny aty vilanin’ny mpiasa satria efa-bolana tsy nandray ny karama. Ankoatr’izay dia nanatevina ny fitakiana fialan’ny Tale ireo mponina, izay voakasika ihany koa satria niankin-doha tamin'ny kraoma. Samy resy lahatra izy ireo fa tsy mahavaha volana ary tsy mamaha olana mihitsy ny Tale Jeneralin’ny Kraoma kanefa mbola mampiditra olona miray petsapetsa aminy ihany. Nanambara ny mpiasa fa hitohy ny hetsika mandra-pahazoana valiny mahafa-po ary dia mangataka amin'ny filoha handray ny andraikiny.